Tayy Aye Yate No comments
အသက် ၁၇ ၊ ၂၅ ၊ ၃၃ ၊ ၄၁ ၊ ၄၉ ၊ ၅၇ ၊ ၆၅ အတွင်း ေရာက်ရှိေနသည့် ြကာသပေတး သားသမီးများ အတွက် - Astrology Consultation
ြမန်မာ နှစ်ဆန်း ၁ရက် ၂၀၁၃ မှ ၂၀၁၄ ြမန်မာ နှစ်ဆန်း ၁ ရက် မတုိင်မှီ အထိ
အင်အားယုတ်ေလျာ့ေနသည့် ေန့နံ / ြဂိုဟ်
၁ ြကွင်းမဟာဘုတ် ေမွးဖွားသူများ - အဂင်္ါ ( အားသင့်)
၂ ြကွင်း မဟာဘုတ် ေမွးဖွားသူများ - စေန ( အားနည်း)
၀ ြကွင်း မဟာဘုတ် ေမွးဖွားသူများ - ေသာြကာ (အားြပင်း)
အင်အားေကာင်းမွန်ေနသည့် ေန့နံ / ြဂိုဟ်
၄ ြကွင်း မဟာဘုတ် ေမွးဖွားသူများ - တနဂင်္ေနွ (အားနည်း)
၅ ြကွင်း မဟာဘုတ် ေမွးဖွားသူများ - ြကာသပေတး (အားသင့်)
၆ ြကွင်း မဟာဘုတ် ေမွးဖွားသူများ - တနလင်္ာ (အားြပင်း)
အင်အား အသင့်အတင့် ေကာင်းသည့် ေန့နံ / ြဂိုဟ်
၃ ြကွင်း မဟာဘုတ် တွင် ေမွးဖွားသူများ - ဗုဒ္ဓဟူး / ရာဟု
အင်အား ယုတ်ေလျာ့ / ေကာင်းမွန်သည့် ြဂိုဟ်များ၏ ရိုက်ခတ်မှုသည် မိမိ ေမွးမဟာဘုတ်အလိုက် အားနည်း၊ အားသင့်၊ အားြပင်း သည့် ရိုက်ခတ်မှုများ ြကံုမည်။ အင်အား ယုတ်ေလျာ့ေနသည့် ေန့နံ ပါသည့် အမည်ပိုင်ရှင်များ ၊ အရပ်ေဒသ ြမို့ရွာများ ၊ လုပ်ငန်းများ အား သတိြပု ဆက်ဆံ သွားလာ ၊ ေဆာင်ရွက်သင့်ြပီး အင်အား ေကာင်းမွန်ေနသည့် ေန့နံ များကိုမူ အားကိုးြခင်း၊ အေထာက်အပံ့ယူြခင်း၊ ေပါင်းသင်းဆက်ဆံ ၊ ရင်းနှီးလုပ်ကိုင်မှုများ ြပုလုပ်သင့်သည်။
ေမွးေန့မှ - ၄၅ ရက် အတွင်း
ပညာေရးဆုိင်ရာ ရပ်တည်ချက်များ ေြပာင်းလဲလာမည်။ ေရွးချယ်စရာ လိုင်းခွဲများ အတွက် ဆံုးြဖတ်ရ ခက်မည်။ Scholarship ခံစားခွင့် ရှိလာမည်။ မိသားစုအိမ် နှင့် ေယာက္ခမအိမ် တစ်လှည့်စီ ေနထိုင်ရန် ြကံုရမည်။ Colleague များြကား Management တာ၀န်ခွဲေ၀မှု ကိစ္စများ သူလုပ် ငါလုပ် ြဖင့် လက်ညှိုးထိုး လွဲချြခင်း ခံရတတ်သည်။ ရာထူးြကီး ေနရာများ ေတွေ၀မှုေြကာင့် လက်လွတ်ဆံုးရှုံးမည်။ နှုတ်မှုေရးရာ ကတိစကား အလွန်အကွျံေပးမိေနမည်။ အေမွဆက်ခံထိမ်းသိမ်းခွင့် ရရှိလာမည်။ အထက်လူြကီးများမှ မိမိအား အရာေပးကာ အေရးတစ်ယူ တုိင်ပင်ေဆွးေနွးြခင်းလည်း ရှိလာမည်။ ရာထူးတက်ရန် ေမှျာ်မှန်းေနသူများ Position အတွက် သို့ေလာသို့ေလာ မြပတ်မသား သတင်းစကား များ ြကားလာရမည်။ ေဗဒင်၊ လက္ခဏာအတတ် တုိ့ကိုလည်း စိတ်၀င်စားလာမည်။ ၀မ်းဗိုက်ပိုင်း ကျန်းမာေရး ြကံုလာရတတ်သည်။ အရည်၊ေရထွက်ပစ္စည်း လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်လိုစိတ် ရှိလာမည်။ စီးပွားေရး လုပ်ကိုင်လိုစိတ်များ ကိန်းေအာင်းလာေသာ်လည်း ေရွးစရာများကာ ၀ိေရာဓိ ြဖစ်ေနမည်။ လက်၀တ်ရတနာများ အထား မှားသြဖင့် စိတ်ရှုပ်ေထွးမှုများ ရှိလာမည်။ ဖုန်း ၂ လံုးပိုင်ဆုိင်မှု ရှိလာမည်။
ေမွးေန့အလွန် ၄၆ မှ ၉၁ ရက် အတွင်း
ကျန်းမာေရး အတွက် Gym membership ၀င်ြခင်း၊ ေရးကူးြခင်းများ ြပုလုပ်ေပးရန် လုိလာမည်။ ဘာသာေရး လိုက်စားမှု ပိုမိုြပုလုပ်သင့်သည်။ ကိုယ်ပိုင်အချိန်များကို အကျိုးရှိရှိ အသံုးချရန်လည်း လိုအပ်မည်။ အစားအေသာက်မှား ၊ ေဆးမှား ြဖစ်လာနိုင်သည်။ ေဆးရံု ၊ လူအိုရံုများသို့ သွားေရာက်ခွင့် ြကံုလာမည်။ မိမိကိုယ်ကိုယ် ပျက်စီးေအာင် ဖျက်ဆီးမည့် အြပုအမူများလည်း ြကံစည်လာတတ်သည်။
ေမွးေန့အလွန် ၉၂ မှ ၁၃၇ ရက် အတွင်း
အနုပညာ၊ အလှအပတို့တွင် နစ်ေမျာစိတ် ြဖစ်ေပါ်လာမည်။ နိုင်ငံြခားြဖစ် အသံုးအေဆာင်များ၊ အလှကုန်ပစ္စည်းများ လက်ေဆာင်ရြခင်း၊ ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူလိုြခင်း ရှိလာမည်။ တစ်နယ်တစ်ေကျး ေြပာင်းေရွှ့ရြခင်း၊ ြပည်ပတုိင်းြပည်များသို့ အေြခချ ေနထုိင်ရြခင်းများလည်း ြပုလုပ်လာရမည်။ အေပျာ်အပါး စိတ်၀င်စားမှုေြကာင့် Club တက်ြခင်း၊ လူမှုေရး ဘာသာေရး ေပျာ်ပွဲများ ဆင်နွှဲြခင်း၊ ပွဲေန ပွဲထိုင်များ ဖိတ်ြကားခံရြခင်းများလည်း ြကံုလာမည်။ Face Book , Social Networking များ အသံုးြပုမှု ယခင်ကထက် ပိုမိုများလာကာ အလုပ်တာ၀န် လစ်ဟင်းမှုများ ရှိလာမည်။ ဘာသာြခား တုိ့၏ ချစ်ခွင့်ပန်ြခင်း၊ Night out ေခါ်ြခင်းလည်း ရှိလာကာ ဖလန်းဖလန်း ထေနမည်။ ေပျာ်ပွဲစား ၊ အပန်းေြဖခရီးများလည်း ထွက်ခွင့် ြကံုမည်။ ချစ်သူ၏ ေတာင်းဆုိမှုကိုလည်း လိုက်ေလျာရြခင်းများ ရှိကာ လက်ထပ်ထိမ်းြမားြခင်း အြဖစ်သို့ စိတ်တူကိုယ်တူ ေရာက်ရှိမည်။ အဆင့်အတန်းြမင့် စာေပကျမ်းဂန် တုိ့ကိုလည်း စိတ်လက်ေပါ့ပါးစွာ သင်ယူနုိင်မည်။ တုိင်းတစ်ပါးသားတုိ့၏ ချီးေြမှာက်ြခင်း ခံရမည်။ ေလာင်းကစားြခင်း ၊ ထီထိုးြခင်းများ ကံတက်ေနမည်။ အတွင်းပစ္စည်းများြဖင့် ြကွား၀ါြခင်း၊ ပိုင်ဆုိင်မှုများ သိသာြမင်သာေစရန် ြပသမှုများ ြပုလုပ်လာမည်။ လုပ်ငန်းများ အကျိုးစီးပွား ြဖစ်ထွန်းမှုေြကာင့် ေဈးကွက်ချဲ့ထွင်ရန်လည်း အခါအခွင့်သင့်လာမည်။ လိင်ကိစ္စ လွန်ကျူးစွာ ခံစားမှုေြကာင့် ကာလသားေရာဂါများလည်း ရလာနိုင်သည်။
ေမွးေန့အလွန် ၁၃၈ မှ ၁၈၃ ရက် အတွင်း
အများ၏ ဂုဏ်ြပုြခင်း၊ ေြမှာက်ေပးြခင်း များ ရှိလာနိုင်ကာ ရိုေသေလးစားခံရြခင်းကိုလည်း ပိုမို လိုလားလာမည်။ မိမိကိုယ် မိမိ အထင်ြကီးမှု၊ စိတ်ဘ၀င်ြမင့်မှုများ ရှိလာြပီး ဩဇာအာဏာ အသံုးြပုြခင်းကို နှစ်ြခိုက်ေနမည်။ စကားေြပာသံ ပိုမိုကျယ်ေလာင်လာမည်။ အလုပ်တွင် အလိုလိုေနရင်း ဂျို ြကွေနမည်။ အုပ်ထိန်းသူရှိပါက ကလန်ကဆန် ြပုမူလာမည်။ အမှန်တရားကို ရှာေဖွလိုမှုများလည်း ေပါ်ေပါက်လာမည်။ အသင်းအဖွဲ့များ ထူေထာင်ြခင်းကို စိတ်မ၀င်စားဘဲ တစ်ကိုယ်ေရ ြကိုးပမ်းချင်ေနမည်။ အတ္တြကီးြခင်း၊ ေနှာင်ြကိုးမဲ့လွတ်လပ်စွာ ေတွးေခါ်မှုများလည်း ြပုလုပ်လာမည်။ အရာရာကို ဦးေဆာင်လိုစိတ် ြကီးမှူးေနမည်။ ေခါင်းမူး ေခါင်းကိုက်ြခင်းများ ယခင်ကထက် ပိုမို ခံစားလာရမည်။ အစိုးရဋ္ဌာနတွင် လုပ်ကိုင်ေနသူများ အဆင်မေြပဘဲ အလွဲလွဲအေချာ်ေချာ် ြဖစ်မည်။ အတုိက်အခံများ တုိးလာမည်။ အထက်လူြကီးတို့မှ အြကိုက်မေတွ့ြခင်းများလည်း ရှိလာမည်။ ဖခင်၏ ကျန်းမာေရးေြကာင့် ေဆးရံု ေဆးခန်းများသို့ သွားလာရြခင်း ရှိလာမည်။ အလုပ် ရှာေဖွေနသူများ စိတ်ပန်းလူပန်း ြဖစ်ြပီးမှ အလုပ်ရရှိနုိင်သည်။ မဆုိင်သည့် အပိုအလုပ်များကိုလည်း စိတ်၀င်တစ်စား ြပုလုပ်ေနမိမည်။ မိတ်ေဆွများအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်ရြခင်း ြကံုလာမည်။ အနာဂတ် ရည်မှန်းချက်များ အေကာင်အထည်ေဖာ်လိုစိတ်များ ြပင်းထန်လာမည်။
ေမွးေန့အလွန် ၁၈၄ မှ ၂၂၈ ရက် အတွင်း
ပရဟိတ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခွင့် ြကံုလာမည်။ ၎င်းလုပ်ငန်းများမှ တစ်ဆင့် ေငွေြကးများ တိုးပွားလာမည်။ ေကျးဇူးရှင်များအား ေထာက်ပံ့ြခင်း ြပုလုပ်လာနိုင်မည်။ ေကျာေထာက်ေနာက်ခံ အားေပးသူလည်း များြပားလာမည်။ ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ် ၊ ဂရုဏာစိတ် တုိးလာမည်။ ချစ်ခင်သူ၏ အြကင်နာအင်အားကိုလည်း ရရှိလာမည်။ လုပ်ငန်းသစ် လုပ်ကိုင်လုိသူများ အရင်းအနှီးထုတ်ေပးသူ ရှိလာမည်။ ယံုြကည်မှုေြကာင့် ေငွေြကး ဥစ္စာများ အပ်နှံလာမှုလည်း ြကံုမည်။ ေမှျာ်မှန်းထားသည့် လစာ တုိးမည်။ ကားအသံုးြပုသူများ Insurance မှ ေလှျာ်ေြကးေငွရမည်။ ကူးသန်းသွားလာေရးအတွက် အေထာက်အကူြပုသည့် ယာဉ်များ နှစ်ရှည်ေချးေငွြဖင့် သံုးစွဲခွင့် ြကံုမည်။ Credit Cards၊ Short term Loan , Mortgage များေလှျာက်ထားနိုင်သည့် အေြခအေန ရှိလာမည်။ အိမ်ငှားရန် ေမှျာ်လင့်ေနသူများ ေမှျာ်လင့်ချက် ြပည့်၀မည်။ အတူေန မိတ်ေဆွများ မိမိအေပါ် နားလည်မှု ရှိလာမည်။ အများနှင့် ဆုိင်သည့် ကိစ္စများတွင် အေရးပါသည့် ေနရာမှ ပါ၀င်လာရမည်။
ေမွးေန့အလွန် ၂၂၉ မှ ၂၇၄ ရက် အတွင်း
ထစ်ကနဲဆုိပါက ေဒါသ အလိုလို ထွက်ေနမည်။။ လက်ရဲဇက်ရဲ ြဖစ်လာကာ ေြကာက်လန့်မှု မရှိဘဲ ြဖစ်ေနမည်။ ဘုန်းတန်ခိုးများလည်း ြကီးထွားကာ ေြပာသမှျ လုပ်သမှျ ေအာင်ြမင်မည်။ ေသွးချင်းများ၏ အေရးကိုလည်း ေအာင်ြမင်စွာ ေြဖရှင်းေပးနုိင်မည်။ အသစ်အဆန်းများကို ဖန်တီးလိုစိတ် ြပင်းထန်လာမည်။ စိတ်အေြပာင်းအလည်း ြမန်ေနမည်။ ေသွးတိုးစမ်းမှုများလည်း ြပုလုပ်ချင်ေနမည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အြမတ်အစွန်း များစွာ ရရှိမည်။ Partner ြဖင့် ေငွေြကးကိစ္စ မြကာခဏ စကားများရမည်။ Social Net work တွင် အေတွးအြမင်များ ဖလှယ်ရာမှ ထိပ်တိုက်ရင်ဆုိင်မှုများ ရှိလာမည်။ ခံယူချက်အတွက် တံုးတိုက်တုိက် ကျားကိုက်ကိုက် ေြဖရှင်းလုိစိတ် ရှိလာမည်။ လက်ေတွ့ဆန်သည့် လုပ်ေဆာင်မှုများ လုပ်ကိုင် ေအာင်ြမင်မည်။ စက်ကိရိယာ အေဟာင်းများ ြပုြပင်လာရနုိင်သလို အသစ်များကိုလည်း ပိုင်ဆုိင်လာမည်။ အချိန်ပိုင်း အလုပ်များ လုပ်ကိုင်မှုေြကာင့် ၀င်ေငွ တုိးလာမည်။ ချစ်သူအသစ် ရှာေဖွေတွ့ရှိလာမည်။
ေမွးေန့အလွန် ၂၇၅ မှ ၃၂၀ ရက် အတွင်း
အေတွးမှား ၊ အြကံမှား ၊ အယူဆမှားများ ေပါ်ေပါက်လာတတ်သည်။ ဆံုးြဖတ်ချက် အမှားများေြကာင့် အြငင်းပွားဖွယ်ရာ ြကံုလာမည်။ စကားအေြပာအဆို မတတ်မှုေြကာင့် အထင်လွဲမှုများလည်း ရှိလာမည်။ နှုတ်မေစာင့်စည်းမှုများ ရှိလာကာ ကတိစကားများ ချိုးေဖာက်မိမည်။ သင်ယူေလ့လာမည့် အရာများ awareness ေလျာ့လာကာ သင်ခန်းစာ၌ စိတ်၀င်စားမှုများ နည်းလာမည်။ သွက်လက်ြဖတ်လတ်မှုများ မရှိေတာ့ဘဲ ြဖစ်ေနမည်။ သားသမီးများ၏ ပုန်ကန် ေတာ်လှန်မှုများလည်း ရှိလာမည်။ လုပ်ငန်းတွင် ဋ္ဌာနအေြပာင်းအလည်းများ ြကံုေတွ့ရကာ ရပ်ေ၀းသို့ ေရွှ့ေြပာင်းခံရမှုများ ြကံုရတတ်သည်။ ခက်ခဲြကမ်းတမ်းသည့် ခရီးေ၀းများ ထွက်ရမည်။ ၀ါသနာအရင်းခံသည့် ဗုဒ္ဓဟူးနံ အရာများ စုေဆာင်းမှု ြပုလုပ်လာမည်။ အများမေြပာလိုသည့် Speech များ ( mourner) ေြပာဆုိလာရမည်။ ဘာသာြပန် ၊ စကားြပန် အလုပ် အခက်အခဲများ ရှိလာမည်။ Relationship break down ြဖစ်ေနမည်။
ေမွးေန့အလွန် ၃၂၁ မှ ၃၆၅ ရက် အတွင်း
ြပည်ပနုိင်ငံ၊ လူမျိုးြခားများနှင့် ကူးလူးဆက်ဆံမှု အဆင်မေြပ ြဖစ်လာမည်။ ဇွဲလံု့လြဖင့် အားထုတ်မှု အကျိုးခံစားခွင့် ေမှးမှိန်ေနမည်။ ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် အချင်းများရမည်။ ၀ဋ်ေြကွးများ ၊ ေြကွးြမီများ ြပန်လည် ေပးဆပ်ရမည်။ ေလျာ်ေြကးများ ေတာင်းခံမှု ရှိလာမည်။ အေယာင်ေဆာင် ၊ လိမ်လည်မှုများ ြကံုရမည်။ တာ၀န်ယူနုိင်စွမး်၊ သည်းခံနိုင်စွမ်း ေလျာ့နည်းလာကာ အနုစိတ်လုပ်ကိုင်ရသည့် လုပ်ေဆာင်မှုများ၌ အားနည်းလာမည်။ အတုအပ ဆင်တုရိုးမှား ၊ ပံုမှားရိုက်ြခင်းများကို စိတ်၀င်စားလာမည်။
ေသာြကာေန့တုိင်း ကုဋီ သန့်ရှင်းေရး နှင့် အဂင်္ါေန့တုိင်း ေရကုသိုလ် ြပုလုပ်ေပးပါ။
ဗုဒ္ဓဟူးနံ နာမည်ရှင်များ၊ ြမို့ ၊ ေဒသ၊ ကုန်ပစ္စည်းများ ညံ့သည်။ ေရွှ၀ါေရာင်၊ အ၀ါေရာင် အြမဲလိုလို ၀တ်ဆင်ြခင်း ေရှာင်ရမည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနာမည်ရှင်များြဖင့် အကျိုးတူြပုလုပ်ြခင်း ေရှာင်ရမည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနံ ြမို့ရွာများသို့ ခရီးသွားြခင်း ေရှာင်ရမည်။ မိမိအမည်သည် ြကာသပေတးြဖင့် စ၍ တနလင်္ာ ပိတ် မှည့်ထားပါက - ဥပမာ ေကျာ်ြမိုင် , ြဖစ်ေနပါက ေငွေြကးများစွာ ရင်းနှီးရေသာ လုပ်ငန်း စတင်ြခင်း ေရှာင်ပါ။
အဂင်္ါ ၊ တနလင်္ာ ၊ ေသာြကာ နာမည်ရှင်များ၊ ေန့နံများ ၊ ြမို့ရွာ ေဒသများ၊ ကုန်ပစ္စည်းများ အကျိုးေပးသည်။ လက်နက်ခဲယမ်း ၊ သံထည်ပစ္စည်း များေကာင်းသည်။ ေန့ကေလးထိန်းေကျာင်း ၊ ဘိုးဘွားရိပ်သာ၊ Nursing Home, ပရဟိတ ၊ အများဆုိင်လုပ်ငန်းများ၊ ဟိုတယ် ၊ Tour Guide, ဇိမ်ခန်း လုပ်ငန်းများ ေကာင်းသည်။
Note: အသက်အပိုင်းအြခား တွက်ြကတဲ့အခါ ကိုယ့်အသက်ဟာ ြမန်မာ နှစ်ဆန်း ၁ရက် ၂၀၁၃ ကေန ၂၀၁၄ ြမန်မာ နှစ်ဆန်း ၁ ရက် မတုိင်မှီ အတွင်း ၂ ခွြဖစ်ေနတာမျိုး ေတွ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆုိရင်ေတာ့ အဲဒီအသက်အပိုင်းအြခားအတွက် ေဟာစာတမ်းကို ရှာဖတ်ရပါလိမ့်မယ်။
ဥပမာ - ေမ ၂၂ ရက် ၁၉၈၀ မှာ ေမွးတဲ့ ြကာသပေတးသားသမီးေတွဟာ ၂၀၁၃ ေမလ ၂၁ ရက် အထိ ၃၃ နှစ်အတွင်း ေရာက်ေနတာေြကာင့် အခုေရးထားတဲ့ ၃၃ နှစ် အေဟာကို ြကည့်ရမှာြဖစ်ြပီး ေမ ၂၂ ရက် ၂၀၁၃ ကို ေရာက်ရင်ေတာ့ ၃၄ နှစ် အေဟာကို ရှာဖတ်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
Age is calculated as @ In the year of @ post here
အသက်ေမွး၀မ်းေကျာင်းမှု အား ေလ့လာြခင်း
iOS Developer တစ်ေယာက်ြဖစ်ဖို့ မဟာဘုတ်ရဲ့ ဘယ်ဋ္ဌာနေတွက ဘယ်လိုအကျိုးြပုသွားတယ်ဆုိတာကို ေလ့လာပါမယ်။
ပံုကေတာ့ (၅) ြကွင်း , စေနသား တစ်ဦးရဲ့ မဟာဘုတ် ပါ။ အမည်က စေန + ရာဟု (၀+၈) = သမ္မဒါန ကာရက အမည်ပုိင်ရှင်။
iOS Developer ဆုိတာ Software Engineer လို့လည်း ေခါ်လို့ရပါတယ်။ Engineer ဆုိရင်ေတာ့ ြပုြပင်ထိမ်းသိမ်းေရး ြဂိုဟ် ြဖစ်တ့ဲ ၄ဟူး နဲ့ သက်ဆုိင်သွားြပီ။ ပညတ်ေတွ ြပည့်နှက်ေနတဲ့ လူ့ဘံုဆုိေတာ့ အင်ဂျင်နီယာ လို့ မသတ်မှတ်ဘဲ Apple က သတ်မှတ်ေပးလိုက်တဲ့ Developer ကိုပဲ ယူြကတာေပါ့။ Developer လို့ ဆုိလိုက်တာနဲ့ တီထွင်သူ , ဖန်တီးသူ ၊ Entrepreneurship ။ တနဂင်္ေနွနဲ့ အများြကီး သက်ဆုိင်သွားြပီ။
၁) အသက်ေမွး၀မ်းေကျာင်းမှုအတွက် အညွန့်ြဂိုဟ် ကို ြကည့်မယ်။ စေန ရဲ့ အညွန့်ြဂိုဟ် တနဂင်္ေနွ ။
အပူ ၊ အလင်း ၊ စွမး်အင်၊ အသက်ဇီ၀ ၊ အီလက်ထေရာနစ် ပိုင်း လုပ်ငန်းဆုိင်ရာေတွ နဲ့ ပတ်သက်မှု ရှိလာမယ်။
၂) တနဂင်္ေနွ က မဟာဘုတ်ရဲ့ မရဏ ဋ္ဌာနမှာ ရပ်တည်ေနတယ်။
မရဏဋ္ဌာန ဟာ အေသးစိတ် ၊ အနုစိတ် သေဘာေတွ ကိန်းေအာင်းေနတဲ့ ဋ္ဌာန။ App တစ်ခုကို ေရးေတာ့မယ်ဆုိရင် code ေတွ ကို အေသးစိတ်ေရးရတာဆုိေတာ့ တနဂင်္ေနွ မရဏတည်တာဟာ developer ြဖစ်ဖို့ အတွက် အေထာက်အကူြဖစ်လာတယ်။
၃) မရဏဋ္ဌာန အိမ်ရှင် က စေန ။
၄) စေနဟာ မဟာဘုတ်ရဲ့ သိုက် ဋ္ဌာနမှာ ရပ်တည်ေနတယ်။
စေနနံ သဘာ၀ နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ app ေတွ၊ Entertainment app ေတွ တီထွင်ဖန်တီးတာ အစရှိတဲ့ သိုက်ဋ္ဌာနရဲ့ သေဘာေတွက အေထာက်အပံ့ ေပးလာမယ်။ စေနသဘာ၀ ဆုိတာ နိုင်ငံြခား ဘာသာြပန် app ေတွ ( Dictionary app လိုမျိုး, ေလာေလာဆယ်ေတာ့ ဖရီးေပးေနေလရဲ့ ) ၊ လခစား ဘ၀ကို တွန်းအားေပးတာကလည်း စေန ြဖစ်ြပန်တာေြကာင့် ကိုယ်ပုိင် app ေတွ ေအာင်ေအာင်ြမင်ြမင် မထုတ်နို်င်ေသးဘဲ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ app ေတွနဲ့ သာလှျင် များစွာ ပတ်သက်ဖုိ့ အေထာက်အကူ ြဖစ်လာတယ်။
အမည် နဲ့ ပတ်သက်ြပိး ဆက်လက် ဆံုးြဖတ်မယ်ဆုိရင်ေတာ့ ၀+၇ = စေန + ရာဟု ( ၀ေန + ၈ဟု) သမ္မဒါန ကာရက အမျိုးအစားြဖစ်တာေြကာင့် သူဟာ ကိုယ့်အသက်ေမွး၀မ်းေကျာင်း အလုပ် နဲ့ ပတ်သက်ြပီး တစ်ေယာက်တည်း လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ အလုပ်မျိုးကိုေတာင်မှ အေဖာ်အေပါင်းနဲ့ လုပ်ရမှ ေကျနပ်တဲ့သူ ၊ စုေပါင်းညီညာ ေအာင်ေြကာင်းြဖာ ကို လက်ကိုင်ထားတဲ့သူ၊ အစုရှယ်ယာ လုပ်ကိုင်ရတာကို စိတ်၀င်စားတဲ့သူ၊ မိတ်ေဆွေတွနဲ့ ေပါင်းြပီး လုပ်မှ ေကျနပ်တတ်သူ အြဖစ် မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
iPredict Podcast - Jan 2013
Podcast - Jan 2013
Discussion about here and there, Astrology , Ethics, Remedies, etc. etc..
ေဗဒင် အေြကာင်း ၊ ေဗဒင်ဆရာ အေြကာင်း ၊ ယြတာ အေြကာင်း ၊ ေန့နံ ေဗဒင်အေြကာင်း ၊ ဆန်းကျမ်း အေြကာင်း
ဟိုအေြကာင်း .. ဒီအေြကာင်း ..
ဒီဇင်ဘာ (၂၃) ရက် ၊ တနဂင်္ေနွေန့ ညေနပိုင်းမှာ ေရွှတိဂံု အထက်ပစ္စယံ အဂင်္ါေထာင့်မှာ ဠင်းတ ငှက် (၃) ေကာင် ၊ ရာဟု ေထာင့်မှာ (၃) ေကာင် ၊ စုစုေပါင်း (၆) ေကာင် ၊ လာေရာက် နား ခဲ့ပါတယ်။
ဠင်းတ နားတာနဲ့ ပတ်သက်ြပီး တစ်ချို့ကလည်း မေကာင်းတဲ့ နိမိတ် ၊ တစ်ချို့ကလည်း ေကာင်းတဲ့ နိမိတ် ၊ တစ်ချိုကလည်း အတိတ်နိမိတ် နဲ့ မသက်ဆုိင်ဘဲ ရိုးရိုးသားသား နားပါလို့ အမျိုးမျိုး ေကာက်ယူ ၊ ေြပာဆုိြကပါတယ်။
အယူအဆ အမျိုးမျိုး ၊ အြမင်မတူတဲ့ ရှုေထာင့်ကေန ဘယ်လိုပဲ ေြပာေနြကပါေစ .. ဘယ်လိုအတွက်ေြကာင့် ဒီနိမိတ်ကို ေကာင်းတဲ့ နိမိတ်၊ ဘယ်လိုအချက်ေြကာင့်ေတာ့ြဖင့် ဒီနိမိတ်ကို မေကာင်းတဲ့ နိမိတ်ဆုိတဲ့ ဓ အြမင်မှာ နိမိတ်၊ အတိတ်မှာ လက်ေဆာင် ၊ အသံမှာ တေဘာင် ဓ ေတွထဲက အြမင်နိမိတ် အတွက် ထင်ရှားတဲ့ လတ်တေလာ ြဖစ်ေပါ်ေနတဲ့ အြဖစ်အပျက် အချင်းအရာေတွမပါဘဲနဲ့ ယခင့်ယခင်က ြဖစ်ပျက်ခဲ့ဖူးတဲ့ အတိတ်နိမိတ်ေတွ အေပါ် အေြခခံြပီး ေကာက်ချက်ချ နိမိတ်ဖတ်တာေတွပဲ ေတွ့ရပါတယ်။
ဠင်းတ နားတာဟာ ြဖစ်ခဲပါတယ် ။ ဘုရားေဂါပက ေြပာတာကေတာ့ လွန်ခဲ့တဲ့ (၃) နှစ်က တစ်ခါ လာနားဖူးတယ်တဲ့။ ဠင်းတ နားတာ ေကာင်းသလား မေကာင်းသလား နိမိတ်ေကာက်ြကတဲ့ အေရးအသားေတွ ေဖ့စ်ဘွတ် နဲ့ တစ်ကွ သတင်းမီဒီယာ ၊ ဂျာနယ်ေတွမှာ ဖတ်ြပီးြကပါလိမ့်မယ်။
ေကာင်းတဲ့ြဖစ်ရပ်ေတွအတွက် တေဘာင်ေတွ ြကိုတင်ြပီး ေပါ်မထားဘူးဆုိရင် ေရွှတိဂံုဘုရားကို ဠင်းတနားတာဟာ ကွျန်ေတာ့်အေနနဲ့ မေကာင်းတဲ့ နိမိတ်အေနနဲ့ ဘဲ ဖတ်ပါတယ်။ဘာေြကာင့် မေကာင်းတဲ့ နိမိတ်လို့ ေကာက်ယူတာလည်း ဆုိတာကိုလည်း ထပ်ရှင်းြပပါ့မယ်။
ပထမဆံုး ဠင်းတ ဆုိတဲ့ ငှက်ကို ဘယ်လို စာလံုးေပါင်းသလည်း ဆုိတာကေန စေြပာရပါမယ်။ တစ်ချို့ကလည်း လင်းတ ဆုိြပီး ေရးသလို အသံထွက်အတုိင်း လဒ ဆုိြပီး ေရးပါတယ်။ ဘယ်သူေတွ ဘယ်လို ေရးေရး ကွျန်ေတာ်ကေတာ့ ဠင်းတ လို့ပဲ ေရးပါတယ်။ အဲသလို ဠြကီး နဲ့ ေရးလိုက်တဲ့အတွက် ဠင်းတ ဆိုတဲ့ ငှက်သတ္တ၀ါ ေသာြကာနံသင့် သတ္တ၀ါ ြဖစ်ပါတယ်။
ဠ - ေသာြကာ ေန့နံပါ
နားတဲ့ အေကာင်အေရအတွက်က ၆ ေကာင်ပါ။
၆ ေကာင် - ေသာြကာ
၃) နားရာ ေနရာ
ဠင်းတ ၆ ေကာင် နားတဲ့ ေနရာဟာ သိဂင်္ုတ္တရ ကုန်းေတာ်ေပါ်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ကွျန်ေတာ်ထင်ပါတယ်။ ၁၀၀% ကေတာ့ ေရွှတိဂံုဘုရားေပါ် နားတယ်လို့ပဲ မှတ်ယူမှာပါ။ ကွျန်ေတာ်ကေတာ့ ေရွှတိဂံု ဘုရားဟာ သိဂင်္ုတ္တရ ကုန်းေတာ်ေပါ်မှာ တည်ထားတာေြကာင့် ဠင်းတ နားတာဟာ ဘုရားေပါ်မှာ နားတယ်လို့ မယူဘဲ သိဂင်္ုတ္တရ ကုန်းေတာ်ေပါ်မှာ နားတယ်လို့ ယူပါတယ်။
သိဂင်္ုတ္တရ ကုန်းေတာ် - ေသာြကာ
(၄) သီေပါမင်း အုတ်ဂူ
ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်ေန့မှာ နုိင်ငံေတာ် သမ္မတြကီးဟာ အိန္ဒိယနုိင်ငံ ရတနာဂီရိ ြမို့မှာ ပထမဆံုး ြမန်မာေခါင်းေဆာင် တစ်ဦး အေနနဲ့ သီေပါမင်းရဲ့ အုတ်ဂူလို့ ေြပာလို့ရတဲ့ အုတ်နန်းြပသာဒ် ဆီကို သွားေရာက်ြကည့်ရှုြပီး ပန်းေခွချပါတယ်။ အဲဒီသတင်းဟာ ၂၃ ရက်မှာ သတင်းအေနဲ့ ဖတ်ရှုေနရပါြပီ။
သီေပါမင်း အုတ်ဂူ - ေသာြကာ
(၅) သိန်းစိန် (ဦး)
သီေပါမင်း အုတ်ဂူကို ပထမဆံုး ြမန်မာေခါင်းေဆာင်တစ်ဦး အေနနဲ့ ပန်းေခွသွားချတာ သမ္မတ သိန်းစိန် (ဦး) ြဖစ်ေနပါတယ်။
သိန်းစိန် - ေသာြကာ
ဒီအချင်းအရာေတွဟာ သိမ်းငှက်ေတွ ဘုရားေပါ်မှာ လာနားတဲ့ အချိန် နဲ့ တစ်ြခားေနရာကို ပျံမသွားခင် အချိန်မှာ ြဖစ်ေနတဲ့ အေြကာင်းအရာေတွပါ။
သတိထားမိြကမလားေတာ့ မသိဘူး။ အေြကာင်းအရာေတွ ဟာ ေသာြကာ ေတွချည်း ြဖစ်ေနတာကိုပါပဲ။
အေြကာင်းအရာ တစ်ခုဟာ အဲဒီေန့နံ ဂဏန်းအေရအတွက် အတုိင်း ြပီးြပည့်စံုသွားရင် မေကာင်းတဲ့ ဆုိးကျိုး ၊ ရလာဒ်ေတွ ထွက်တယ် လို့ ဆုိပါတယ်။ ဥပမာ - အဂင်္ါ နံ (၃) နဲ့ ပတ်သက်ြပီး ေြပာရမယ်ဆုိရင် အဂင်္ါေန့ မှာ လူ ၃ ေယာက် ဆံုေတွ့ြပီး ေအာ်စီအေြကာင်း ေဆွးေနွးတာ ဆုိရင် အဲဒီကိစ္စ ြပဿနာနဲ့ အဆံုးသတ်ရတာမျိုး ေပါ့။
အဲသလို အေတွ့အြကံုကလည်း ရှိေနေတာ့ စဉ်းစားမိတာက အခုနိမိတ်ေတွဟာ ေသာြကာ နံ အေြကာင်းအရာေတွ ြဖစ်ပျက်ေနတာေြကာင့် ေနာက်ထပ် ေသာြကာနံ နဲ့ ပတ်သက်တဲံ အေြကာင်းအရာ တစ်ခု ြဖည့်စွက်ေပးရမယ်။ အဲဒါဟာ ဘာြဖစ်နိုင်မလည်း ......
သတိရမိလိုက်တာက သွားေလသူ စာဖတ်ေနသူြကီး ..။ ေသာြကာပိုင်ရှင်ကိုး ။ ေသာြကာေတွ ထပ်ကာ ထပ်ကာ စဉ်းစားြပီး နိမိတ်ေကာက်လိုက်မိတာက ဒီလို ..။ နိမိတ်ေကာက်တာထက် အေဟာပိုင်းဖက်ကို ပိုေရာက်သွားတာေပါ့။
ေသာြကာေန့မတုိင်ခင် သွားေလသူြကီး (စာဖတ်ေနသူြကီး ) သုဿာန်သို့ သက်သက်သာသာ သွားေသသည်။
ေဖ့စ်ဘွတ် စာမျက်နှာ - ေဗဒင်
သိပ်မြကာပါဘူး .. ။ တစ်ပတ်အတွင်းေပါ့.. တနလင်္ာေန့ မှာ ေသာြကာနံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ြမို့ မှာ ြဖစ်ခဲ့ပါတယ်။
(၆) ဟဲဟိုး ြမို့ - ေသာြကာ
ေလေြကာင်းဆုိင်ရာ မေတာ်တစ်ဆမှု - ေသာြကာနံ - ခရီးသွားလာေရး နှင့် သက်ဆုိင်ြခင်း
ဒီနိမိတ်ေတွဟာ ြပီးြပည့်စံု သွားပါတယ်။ ေသာြကာနံ နိမိတ် ၆ ခု စလံုး ြဖစ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဆုိရင် ဘာေတွ နိမိတ်ေကာက်နိုင်မလည်း .. ။ ေသာြကာနံ နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အေြကာင်းအရာေတွ အားလံုး ကို မေကာင်းတဲ့ နိမိတ် ေကာက်ယူနုိင်ပါတယ် . . .
နမူနာ ေကာက်ြကည့်ရေအာင် ။ ေအာက်က လုပ်ငန်းေတွဟာ ဥပေဒ အေြကာင်းအရာေတွေြကာင့် ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါး ြဖစ်လာနိုင်သလို အဲဒီနယ်ပယ်က ထင်ရှားတဲ့ သူေတွ ရုတ်တရက် ေသဆံုး ပျက်စီးတာ ေတွ နဲ့ တစ်ြခား ဆုိး၀ါးတဲ့ အေြကာင်းအရာမှန်သမှ ေကာက်ယူနုိင်ပါတယ် . .
(၁) ြပည့်တန်ဆာ ဥပေဒ အဆုိး၀ါးဆုိး အေြခအေန ြဖစ်လာနုိင်
(၂) ဟိုတယ် ခရီးသွားလာေရး ကျဆင်းလာနုိင်
(၃) သစ်သီး၀လံ နှင့် ဥယျာဉ်ြခံ လုပ်ငန်းများ အထွက်မတုိး ၊ ဓာတုေဆး၀ါး သံုးစွဲမှု ပိုဆုိးလာနုိင်
(၄) အေပျာ်အပါး အမျိုးမျိုး နှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရြခင်း ၊ ေရာဂါရြခင်း
(၅) အလှြပုြပင်ေရး - ြမန်မာ့မျက်စိအြမင်အရ သရုပ်ပျက်ေစမည့် အြပင်အဆင်များ ပိုမိုတုိးလာနုိင်ြခင်း
ေကာက်တာေတွများသွားလို့ ေတာ်ေသးြပီ ...
လက်စွပ်နဲ့ ေဗဒင် ေမးဖူးြကလား
ဆံပင်ချည် (သို့) အပ်ချည်နဲ့ တစ်ေတာင့်ထွာ တုိင်းြပီး လက်စွပ်မှာ ချည်လိုက်ပါ။ ဖလား (သုိ့) ခွက်ထဲ ေရြဖည့်ြပီး အေမွှးနံ့သာ ပက်ြဖန်းလိုက်ပါ။
ညာဖက်လက်က စားပွဲ (သို့) ြကမ်းြပင်ေပါ်ကို တံေတာင်ေထာက်ြပီး ခုနက ဆံပင်ချည် အဆံုး ကို ကိုင်ထားပါ။ ဆံပင်ချည်နဲ့ ချည်ထားတဲ့ လက်စွပ်ကို အဲဒီဖလားေလးေပါ်မှာ ၀ဲလည်၀ဲလည်ြဖစ်ေအာင် ယမ်းြပီးေတာ့ ကိုယ်ေမးချင်တဲ့ ေမးခွန်းကို စိတ်ထဲကေန ေလးေလးနက်နက် အာယံုြပုြပီး ေမးယံုပါပဲ..။
" အခုချစ်သူနဲ့ တစ်သက်လံုး လက်တွဲရမယ့် တစ်ဘ၀ချစ်သူ ဆုိရင် ညာဖက်ကို လက်စွပ်က ၀ိုက်ြပီး ယမ်းြပပါ။ ခဏချစ်သူဆုိရင် ဘယ်ဖက်ကို ယမ်းြပပါ"
ထူးဆန်းစွာပဲ လက်စွပ်က သင့်ကို ယမ်းြပပါလိမ့်မယ်..။
Spain V Italy ( Euro 2012 - Final )
Tayy Aye Yate5comments
Spain V Italy - Euro 2012 Final
စပိန် အသင်း နည်းြပ နဲ့ အီတလီ အသင်း နည်းြပ နှစ်ေယာက် စလံုးဟာ ၃ြကွင်းဖွား မဟာဘုတ် ပိုင်ရှင်ေတွပါ။ ဒါေြကာင့် သူတို့ ၂ ေယာက်စလံုးဟာ ဒီ ၁၃၇၄ ေကာဇာမှာ စေန ဆန်းကျင်တာချင်း တူေနပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ ေန့နံ အရခွဲြခားလိုက်တဲ့အခါမှာေတာ့
အီတလီ အသင်းနည်းြပဟာ တနလင်္ာသား ြဖစ်တာေြကာင့် ဘုမ္မိဆန်းကျင်
စပိန်အသင်း နည်းြပဟာ စေနသား ြဖစ်တာေြကာင့် ပရိ၀ါယ ဆန်းကျင် ြဖစ်သွားပါေတာ့တယ်။
ဘုမ္မိဆန်းကျင်ဆုိတာ ရာဇ၀င် အသစ်ထွင်တာ ၊ အေဟာင်းေတွကို ေြခဖျက် စွမး် ရှိနုိင်တယ်ဆုိတာကို Chelsea V Bayern Munich ပွဲမှာ ေရးသားခဲ့ြပီးပါြပီ ။
ပရိ၀ါယ ဆန်းကျင်ကေတာ့ အြခံအရံ အသိုင်းအ၀ိုင်းေတွ နဲ့ ပတ်သက်ြပီး ထူးြခားမှုေတွ ေပးစွမ်းမယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။
ဒဿာကို ြကည့်ရင် အီတလီ နည်းြပ အခု လက်ရှိေရာက်ေနတဲ့ ဒဿာ ဟာ စပိန်အသင်း နည်းြပ ရဲ့ ဒဿာထက် အင်အား ေကာင်းပါတယ်။ (မှျား အနီေရာင်ကို ြကည့်ပါ)
ဒါေြကာင့် အီတလီ ဟာ ချန်ပီယံ ြဖစ်မယ်လို့ ခန့်မှန်းပါတယ်။
Italy to Win Euro 2012
တိုင်ထိပ် ဒဿာ စားြပီး ေကာဇာ ေဇယျြဂိုဟ် ကပ်တာေြကာင့် ပယ်နယ်တီ ကန်သွင်းဖုိ့ေတာင် အချိန်ေရာက်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ခန့်မှန်းပါတယ်။
Italy to Win ( Including Extra time - No Penalty shoot )
မဟာကာလ ဇာတာ အရေတာ့
- နိစ္စဘဂင်္ နိစ် ြဖစ်ေနတဲ့ အီတလီ အသင်းရဲ့ အြပာေရာင် ဟာ ၁၂တန့်ရပ်ေနတဲ့ စပိန်အသင်းရဲ့ နီညိုေရာင် ထက် အင်အားေကာင်းတာရယ် ..
- ၉ တန့် သခင် ၁၂ တန့် ရပ် ၊ ၁၁တန့် သခင် ၄ တန့် ရပ်တာေြကာင့် " ရာဇ၀င်ေြကွး ဆပ်မယ်" ဆုိတာရယ်ေတွေြကာင့်
Asian Handicap ကေတာ့ စပိန်က အေပါ်ေြကး ေပါက်တာေြကာင့် အီတလီကိုပဲ ယူြကတာေပါ့။
- ရင်ခုန်ချင်ရင် အီတလီ ယူ
- တိုက်စစ်ြကိုက်ရင် စပိန် ယူ
လို့ ေြပာရမဲ့ ပွဲတစ်ပွဲလို့ ခန့်မှန်းပါတယ်။
Germany V Italy ( Euro 2012 Semi Final)
Tayy Aye Yate3comments
Italy - အနုိင် ( 90 minutes )
Germany V Italy ( Euro 2012 Semi Final )
ကင်မရာေရှ့ ေအာင်ပွဲ ခံမည့် ၁၁တန့်
ဒီမဟာကာလ ဇာတာပံု အရ တစ်ြခား ဘာမှ မေြပာေတာ့ဘူး.. ရှုပ်လွန်းလို့ ။
အြပာေရာင် ၀တ်ဆင်တဲ့ အီတလီ အသင်း ဟာ အြဖူေရာင် ဂျာမဏီထက် အားသာတယ်။
Italy Win (90 minutes) - NO extra time
Asian Handicap - အီတလီ ေအာက်ေြကးယူမယ်။
Portugal V Spain ( Euro 2012 Semi Final )
Tayy Aye Yate 8 comments
ကင်မရာေရှ့ ေအာင်ပွဲခံနုိင်မဲ့ - ၁၁ တန့်
၁၁တန့်ကို ကိုယ်စားြပုေနတဲ့ ရာသီကေတာ့ ြဗိ စ္ဆာ ရာသီ ။ ြဗိစာ္ဆရာသီ အိမ်ရှင် ြဖစ်တဲ့ အဂင်္ါ ဟာ ၅တန့်မှာ ရပ်ြပီး ၃တန့်မှာ ရှိတဲ့ စေနက လှမ်းြမင်တယ်။
စေနဟာ အဂင်္ါကို ရန်ြပုတာဆုိေတာ့ အဂင်္ါမှာ ဒုက္ခများသွားတာေပါ့ ။ အဂင်္ါ ဒုက္ခများေတာ့ အဂင်္ါအိမ်ပိုင်တဲ့ ြဗိစာ္ဆလည်း ဒုက္ခလှလှ ေတွ့ြပီေပါ့ ။ စေနက ၃တန့်မှာ ရှိြပီး အဂင်္ါကို ြမင်ထားတာေနာ် .. ၃တန့် ဆုိတာ အိမ်နီးချင်းကို ေဖာ်ညွှန်းတာ ။ ရန်- အေနနဲ့ ြမင်ေတာ့ အိမ်နီးချင်း ဒုက္ခေပးြပီေပါ့.။
စပိန် နဲ့ ေပါ်တူဂီက ဖင်ချင်းကပ် အိမ်နီးချင်း နုိင်ငံေတွေလ.. အဂင်္ါ က စပိန် ကိုယ်စားြပု ေန့နံ ဆုိေတာ့ကာ.. စပိန်ဟာ အိမ်နီးချင်း ဒုက္ခေပးတာ ခံရမယ်လို့ ယူဆရမှာေပါ့။
၃ဂင်္ါ ရပ်ေနတာ ၅တန့်ဘာ၀ ။ ေဖာ်ညွှန်းတဲ့ အဓိပ္ပါယ်က " ေပးဆပ်ေနရတဲ့ အချစ်များ " တဲ့။ ပရိတ်သတ်ေတွကို ေပးဆပ်ပါေတာ့မယ်။ အိမ်နီးချင်း ဒုက္ခေပးလိုက်လို့ ေပးဆပ်ရေတာ့မယ် ။
၅တန့် အိမ်ရှင် ေသာြကာ ဟာ ၁၂တန့် မှာ ရပ်ေနေတာ့ ၆တန့် - ၈တန့်- ၁၂တန့် အဆိုးေဟာရမှာေပါ့။ ြပီးေတ့ာလည်း အဲဒီ ၁၂တန့်ကို ၃ဂင်္ါက ြပန်ြမင်ထားေသးတယ်။ ဧည့်သည်က အိမ်ရဲ့ အရှင်သခင်ကို သူပိုင်တဲ့ အိမ်ေပါ်မှာ ြမင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ တစ်ြခားအိမ်မှာ သွားေတွ့တာမျိုး ။ သာမိဒဿန ယုဂ်လား ဘာလားေတာ့ မသိပါဘူး။ တစ်ခါ ၅တန့်အိမ်ရှင် ေသာြကာကို စေနကလည်း ြမင်ထားြပန်ေသးတယ်။
ေပါ်တူဂီ ကို်ယ်းစားြပု ြကာသပေတး ဟာ ၇တန့် မှာရပ်ြပီး သခင် ၂လင်္ာရဲ့ အြမင်ကို ခံေနရတယ်။ သမက်ကို အေဖက ြမင်ထားတဲ့အြမင်ဆုိေတာ့ ေကာင်းတယ်လို့ ဆုိရမယ်။ ဥုစ်လည်း ရေနတာကိုး ။
ြကာသပေတးဟာ ၁၁တန့်ကို ြမင်ထားတယ်။ ၃တန့်က စေနကိုလည်း ြမင်တယ်။ စေနကို ြမင်တာဟာ လဂ်သခင်ြမင်တာဆုိေတာ့ အေကာင်းေတွက ထပ်ထပ်တုိးေနတာေပါ့ (ထင်တာေြပာတာပါ)..
ဒီပွဲကို ေပါ်တူဂီ အနိုင် ခန့်မှန်းပါတယ်။ ဘယ်သူေတွ ဘာေြပာေြပာ ေပါ်တူဂီ အနိုင်ပါပဲ။
PORTUGAL to WIN (inclusive of extra time and penalty )
စပိန်ဟာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအတွက် ေပးဆပ်ရမှာ ြဖစ်တာေြကာင့် ကိုယ့်ဂိုး ကိုယ်ြပန်သွင်း တာမျိုး , penalty ေပးလိုက်ရတာမျိုးေတွ ြဖစ်လာစရာ အေြကာင်းေတွ ရှိလာပါမယ်။
ြဗိစာ္ဆဟာ အသီးသီးတဲ့ ရာသီ ြဖစ်တာေြကာင့် ဂိုးမရှိ သေရနဲ့ မိနစ် ၉၀ ြပီးသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူးလို့ ခန့်မှန်းပါတယ်။
စပိန် အေပါ်ေြကးဆုိရင်ေတာ့ ေပါ်တူဂီကို ေအာက်ေြကးယူြပီး ေလာင်းမယ်။
England V Italy ( Euro 2012 - Quarter Final)
England V Italy ( Euro 2012 - Quarter Final )
ကင်မရာေရှ့ ေအာင်ပွဲ ခံ နိုင်မဲ့ - ၁၁ တန့်
ရာသီအရ - တူရာသီ။ တရားမှျတမှု ကုိယ်စားြပုတဲ့ ချိန်ခွင် ရုပ်ပံုနဲ့ သတ်မှတ်ထားြပီးေတာ့ ဒီရာသီဟာ ေန့တာ ၊ ညတာ တူညီတယ်။ ညီညွတ်မှုကို ေဖာ်ေဆာင်တယ်။ အဲဒီ အချက်ေတွေြကာင့် ဒီပွဲကုိေတာ့
မိနစ် ၉၀ - အချိန်ပို မပါ .. သေရ မှန်းပါတယ်
DRAW !! 90 minutes
၁၁တန့်ကို အြမင်ြပုြကတဲ့ ြဂိုဟ်ေတွက အဂင်္လန်အသင်း ကို်ယ်စားြပု တနဂင်္ေနွရဲ့ အိမ်ရှင်ြဖစ်တဲ့ အဂင်္ါ (၈တန့် အြမင်) နဲ့ ကိတ် ( ၇တန့်) အြမင် အေနနဲ့ အဆုိးြမင်ြကပါတယ်။
ဂိုးစသွင်းမယ် ဆုိရင် အဂင်္လန် အသွင်း စသွင်းမယ်လို့ ခန့်မှန်းပါတယ်။ (အဂင်္ါသေဘာ) ပထမပိုင်း ၄၅ မိနစ်ရဲ့ တစ်၀က် ၂၇ မိနစ် အတွင်း အဂင်္လန်အသင်း ဂိုးသွုင်းနုိင်မယ်လုိ့ ခန့်မှန်းပါတယ်။
ပထမပိုင်း - အဂင်္လန်
ပထမပိုင်း ဂိုး - ၁း၀
အီတလီအသင်း ကုိယ်စားြပု တနဂင်္ေနွဟာလည်းပဲ ၁၂တန့် မှာ ရပ်ေနေတာ့ အဂင်္လန်နဲပ အတူတူပဲ ြဖစ်ေနတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အေရာင်နဲ့ ခွဲလိုက်ပါမယ်။ အီတလီအသင်း အေရာင်က အြပာေရာင် ဆုိေတာ့ အြပာေရာင် ကိုယ်စားြပုတဲ့ ြကာသပေတးဟာ လဂ်သခင် အေနနဲ့ ၂တန့်မှာ နိစ်ခံေနပါတယ်။ အာသာဘ၀ ြဖစ်တာေြကာင့် ရည်မှန်းချက် - လုိလားချက်ေတွ ေမှးမှိန်ပျက်စီး စရာ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ၁တန့်ကို အြမင်ြပုတဲ့ ြဂိုဟ်ကေတာ့ ြကာသပေတးနဲ့ အိမ်ချင်း ဖလှယ်ေနတဲ့ စေန ပါ။
အီတလီ အသင်းဟာ ေချပဂိုးကို ေနာက်ကျမှ သွင်းယူနုိင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းပါတယ် ( စေန သေဘာ) .. ဒုတိယပိုင်း ၂၇ မိနစ် ေနာက်ပိုင်း ( ၇၂ မိနစ် ေနာက်ပိုင်း) အချိန်ေတွဟာ အီတလီ အသင်းအတွက် ေချပဂိုးသွင်းယူနုိင်မဲ့ အချိန်ေတွလို့ ခန့်မှန်းပါတယ်။
ဒုတိယပိုင်း - အီတလီ ေချပဂိုး
ဒုတိယပိုင်း ဂိုး - ၁း၁
ဂိုး Forecast ကေတာ့ တူရာသီ ြဖစ်တာေြကာင့် သေရ , ညီတူညီမှျ ေပါ့။
Asian Handicap ဆုိရင်ေတာ့ ေအာက်ေြကး ယူပါမယ်။
ြမတ်​ေသာ ကာယကံ၊​ ဝဇီကံ၊​ မ​ေနာကံ၌ သင်၏​ေဆာက်တည်ြခင်း​သည် ြဖစ်​ေစသတည်း​။
ထို့​အတူ သင့်​အား​ ​ေကာင်း​ြမတ်​ေသာနက္ခတ် ၊​ ​ေကာင်း​ြမတ်​ေသာ မဂင်္လာ သည် ြဖစ်​ေစသတည်း​
အို . . . ဘား​မား​ ဟု အမိြမန်မာြပည်ြကီး​ ကို
You can reach me by calling the following number on O2 network.
+44 (0)7522 722 423
I am also using Viber free call application on IOS device.
Daw Htwe - Chilli
Daw Htwe - Chilli powder Better taste - Better food
No.447, Thumana Road, 16/3 Block, Thingangyun Township., Yangon, Myanmar Tel: +95-1-577550.
Business Hour : 9:00am to 5:00pm
60 Seconds reading ()
Black List ()
iPredict - 1373 ()
Live Tarot ()
ပံု​​ေတာ်စံု တား​​​ေရာ့​​ ()
အဂင်္​ဝိဇ္ဇာပညာ နိဒါန်း​​ ()
​​ေဗဒင်ပညာ နိဒါန်း​​ ()
ဆရာ မင်း​​သိခင်္​ ဇာတာအား​​ ​​ေလ့​​လာြခင်း​​ (၂)
ကသစ်မဟာဘုတ် အား​​ နား​​လည်ြခင်း​​ - Understanding the Mahabote Lord. လက်ရိုး​​​ေဗဒင် ၁၂ရာသီခွင်မှာ စ, သာ , ​​ေရွှ , ကူ , အင်း​​, ၀, သူ, ဆန်...
လူ​​ေလး​​တို့​​သိ​​ေနတဲ့​​​ေအာင်လံထူစစ်သူြကီး​​ပွဲ ဆိုတာနဲ့​​တည်​​ေဆာက်ထား​​တာကို မဟာဘုတ်လို့​​​ေခါ်တယ်ကွဲ့​​.အဟက်အဟက် အဟက်အဟက်.. ရီချင်တယ...
​​ေတဇ အရပ် နဲ့​​ သီရိအရပ်
ပျိုပျက်အိုမင်း​​​ေနတဲ့​​ အိမ်တို့​​၊​ နာမကျန်း​​ြဖစ်ြပီး​​ ​​ေရာဂါစွဲ​​ေနတဲ့​​သူ အစရှိတဲ့​​ မဂင်္​လာမရှိတဲ့​​ အရာ​​ေတွကို ​​ေတွ့​​ြမင်လို့...
နက္ခတ်​​ေဗဒင်ပညာ သို့​​မဟုတ် လက်ရိုး​​​ေဗဒင်
ြမန်မာ့​​ရိုး​​ရာ ​​ေဗဒင်ပညာနဲ့​​ပတ်သက်ရင်​​ေတာ့​​ လက်ရိုး​​​ေဗဒင် နဲ့​​လက်ဆန်း​​​ေဗဒင်ဆိုြပီး​​ အြကမ်း​​ဖျဉ်း​​ ခွဲြခား​​​ေြပာလို့​​ရပါလိ်...
*This article contains no astrological jargon* ​​ေနထိုင်မှုအတွက် တစ်​​ေထာင့်​​တစ်​​ေနရာမှ Earth လို့​​​ေခါ်တဲ့​​ပထဝီ​​ေြမြကီး​​ ​​ေပါ်မှာ သ...
ေမာ်ကွန်းတိုက် () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () ()
If you are selling in store & online
1 code - 5,000 Kyats
MMASTROLOGY isaTrading Name of
MYANMAR ASTROLOGY LTD
company No 07348693, registered in England and Wales
1) Zay Yar Maung
2) Tayy Aye Yate
Unauthorised alteration of articles are strongly prohibited.